Fanadiovana omby halatra : olona sivy voasambotry ny zandary, Fib anjatony hosoka sarona | NewsMada
Fanadiovana omby halatra : olona sivy voasambotry ny zandary, Fib anjatony hosoka sarona
Olona miisa sivy, ka nisy veterinera, nisy koa olona mpiasa ao amin’ny orinasa Madaomby no voasambotry ny zandarimariam-pirenena tany amin’ny faritr’Itasy. Nahatrarana fitaovana fanaovana hosoka sy Fib hosoka marobe tany amin’izy ireo.
Sarona ny 26 sy 27 septambra teo ny olona sivy mianadahy mpanadio omby halatra sy nanao hosoka taratasin’omby (fiche individuelle de bovin) na Fib hanadiovana ireo omby halatra. Fib miisa 455 hosoka ihany koa sy fitaovana hafa fanaovana izany no sarona tamin’io tambajotra ravan’ny zandary io.
“Rehefa nanao fikaroham-baovao ny zandary miasa ao Ambatomirahavavy, nandre tamin’ireo olona tsara sitrapo fa misy andian’olona mpanao Fib sandoka ao amin’ny trano iray ao amin’ny fokontany Ambohinirina Ambatomirahavavy, distrika Arivonimamo. Tsy niandry ela izy ireo fa rehefa nahazo ny fahazoan-dalana hisava ny trano, niroso tamin’izany”, hoy ny fanazavana. Tratra tao noho izany ny Fib efa nampiasaina saingy efa voafafa ny eo amin’ny faritra fanoratana ny volon’omby miisa 155. Olona iray no voasambotra tamin’izany. Nanoro ireo olona mpandray an’ireo Fib hosoka ireo izy ka ny 27 septambra, voasambotra tany amin’ny tsenan’ombin’ny kaominina Soavinandriana Itasy ny olona miisa enina izay mbola nahatrarana Fib miisa 300. Voasambotra ihany koa ny olona 2 hafa teny Ampasika, Itaosy, teny amin’ny abatoara ka isan’izany ilay veterinera izay tokony hitahiry ireny Fib ireny rehefa maty ny omby ary tsy maintsy manipika izany alohan’ny handorana azy ireny mba tsy ho afaka ampiasaina intsony.
Tamin’ny famotorana, samy niaiky ny helony amin’ny famotsiana omby halatra, fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka amin’ny antontan-taratasim-panjakana avokoa izy rehetra ireo ary efa ela nanaovana izany. Tratra tamin’izy ireo ihany koa ny “produits chimiques” sy ranom-panafody vitsivitsy ary “mouchoirs à jeter” fampiasan’izy ireo amin’ny famafana ny soratra amin’ireo Fib efa niasa ireo.
Natolotra ny fampanoavana tao amin’ny tribonalin’Arivonimamo, ny 28 septambra teo, ireto dahalo ambony latabatra, ka ny efatra tamin’izy ireo no tafiditra am-ponja vonjy maika fa ny dimy hafa kosa nahazo fahafahana vonjimaika.